गर्मीमा कस्तो खाना खाने ? | Nagarik News - Nepal Republic Media
गर्मीमा कस्तो खाना खाने ?
२१ असार २०७६ ३ मिनेट पाठ
जाडाको तुलनामा गर्मी मौसम रोगका लागि जोखिम मानिन्छ। विशेषगरी छालाजन्य तथा पेटजन्य रोगका लागि। स्वस्थ रहन व्यायाम जस्तै खानाको पनि ठूलो भूमिका हुन्छ। यदि खाना स्वस्थ भएन भने सिधै पाचनप्रणालीमा असर गर्छ।
नियमित खानामा बढी मसला, पिरो र चिल्लो हुनुहुँदैन। तरकारी भने प्रशस्त मात्रामा खान सकिन्छ। आँपजस्ता बढी क्यालोरी भएका फलफूल धेरै खानुहुुँदैन।
गर्मीमा विशेष दूषित पानी र दूषित खानाले धेरैजसो रोग लाग्ने गर्छन्। तसर्थ यो मौसममा सफा र ताजा खानामा जोड दिनुपर्ने सुझाव पोषणविद्को रहेको छ। टिचिङ अस्पताल महाराजगन्जकी पोषणविद् नानीशोभा शाक्यका अनुसार गर्मीमा शरीरलाई जाडाको तुलनामा कम खानाको आवश्यकता पर्छ। यो मौसममा जाडाको तुलनामा शरीरको बिएमआर (शक्ति) कम खर्च हुन्छ। यस कारण शरीरले जाडोमा जस्तो गर्मीमा बढी खानाको माग गर्दैन। तर शरीरबाट पसिना बढी बगेर जाने र घामको तापकाले शरीरमा पानीको मात्रा भने केही बढी चाहिन्छ। यो आवश्यकतालाई नबुझेर कतिपय मानिसले कमजोरी महसुस पनि गर्छन्।
त्यही बहानामा बढी क्यालोरीका फलफूल तथा खानासमेत खाने गरेको देखिन्छ। यस्तो गर्नु गलत भएको पोषणविद् शाक्य बताउँछिन्। ‘यो मौसममा शरीरलाई जाडाको जस्तो बढी शक्ति चाहिँदैन, कम क्यालोरी भएका फलफूल तथा खाना खान सकिन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘आँपजस्ता बढी क्यालोरी भएका फलफूल धेरै खानुहुुँदैन।’
जुस या पानी खानैपरे दैनिक एक÷दुईवटा फलफूल खान सकिन्छ। यसैगरी काँक्रा, खरबुजा, मूलाजस्ता फलफूल तथा सलाद पर्याप्त मात्रामा खान सकिन्छ। एउटा मानिसले दैनिक एक पाउसम्म खान सक्छन्।
दही या मही खानुपरे दैनिक दुईदेखि तीन गिलाससम्म खान सकिन्छ। नियमित खानामा बढी मसला, पिरो र चिल्लो हुनुहुँदैन। तरकारी भने प्रशस्त मात्रामा खान सकिन्छ। तर मानिसको शरीरको तौल र उचाइअनुसार कति क्यालोरी खान मिल्छ भन्ने कुरा निर्धारण हुन्छ। गर्मीमा पसिना बढी बग्ने भएकाले पानीको मात्रा बढी चाहिन्छ। शरीरमा जलवियोजन नहोस् भन्न आवश्यकताअनुसार दैनिक तीन लिटरसम्म पानी पिउन सकिन्छ।
प्रकाशित: २१ असार २०७६ ०७:४३ शनिबार
मसला गर्मी क्यालोरी